လျှပ်စစ် ကား အားသွင်း ဝန်ဆောင်မှု NaaS Technology Inc. ကို NASDAQ တွင် စာရင်း ပြု သည် - Pandaily
လျှပ်စစ် ကား အားသွင်း ဝန်ဆောင်မှု NaaS Technology Inc. ကို NASDAQ တွင် စာရင်း ပြု သည်
Jun 13, 2022, 13:03ညနေ 2022/06/13 14:06:59 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား အားသွင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေး သူ NaaS Technology Inc.တရားဝင် Nasdaq စာရင်းဝင်ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် NAAS စတော့ရှယ်ယာ နှင့်အတူ ၎င်းသည် ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ စာရင်းဝင် သည့် တတိယမြောက် တရုတ် အယူအဆ စတော့ရှယ်ယာ ဖြစ်ပြီး IPO ကိုစတင် သည့် ပထမဆုံး အားသွင်း ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
NaaS Technologies ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု မ ပေါင်း မှတဆင့် ၎င်း၏ စာရင်း ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် RISE Education Cayman Ltd. နှင့် ပေါင်းစည်း ခြင်း သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ April ပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် RISE ပညာရေး အစု ရှယ်ယာရှင် များ အစည်းအဝေး သည် ကုမ္ပဏီနှင့် ပေါင်းစည်း ခြင်း သဘောတူညီချက် အား ပြန်လည်သုံးသပ် ပြီး အတည်ပြုခဲ့သည်။ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် RISE Education သည် Securities and Exchange Commission (SEC) သို့ NaaS Technology Inc မှ နှစ်နှစ် ဘဏ္ financial ာရေး အချက်အလက်များကို တင်သွင်း ခဲ့ပြီး Nasdaq သို့ စတော့ရှယ်ယာ ကုဒ်နံပါတ် ပြောင်းလဲ ခြင်းကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာ များကို တင်သွင်းခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:လျှပ်စစ် ကား ဘက်ထရီ အားသွင်း သည့် ကုမ္ပဏီ NaaS သည် RISE ပညာရေး နှင့်ပူးပေါင်း မည်
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး NaaS Technology Inc. ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် NewLink ဟုလည်းခေါ် သည်။ ရေနံ ၊ စွမ်းအင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင် မှုများတွင် အဖွဲ့ ၀ င် များ၊ အမြန် စတိုးဆိုင် များ၊ Newchain Cloud စသည်တို့ပါဝင်သည်။
China Insights Consulting မှ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုအရ NaaS Technology Inc သည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင် ပေးခဲ့သည်။ Third-party charging station operator များနှင့် ၄ င်း၏ network နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အများပြည်သူ သုံး DC fast charging လိပ်ခေါင်း အရေအတွက် အား အားသွင်း နိုင်သည့် စွမ်းရည် ကြောင့် ကုမ္ပဏီ သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံး လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ကွန်ယက် တစ်ခု ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန် တွင်၎င်း၏ စမတ် စွမ်းအင် လုပ်ငန်း သည် မြို့ ပေါင်း ၂ ၈၈ ခုနှင့် အားသွင်း တိုင် ၂ ၉၀, ၀၀၀ ကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။ လိပ်ခေါင်း ၂၀၀, ၀၀၀ ကျော်သည် DC အမြန် ဖြည့် ထားသော လိပ်ခေါင်း များဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည် ရှိ အများပြည်သူ သုံး DC အမြန် ဖြည့် ထားသော လိပ်ခေါင်း များ၏ ၅၁% ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Smart Power သည် ယူနစ် ၅၅ သန်းကို မှာယူ ခဲ့ပြီး ၁. ၂ ၃၃ ဘီလီယံ ကီလိုဝပ် နာရီ အားသွင်း နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များအား အများပြည်သူ အားသွင်း နိုင် မှု၏ ၁၈% သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၏ ၈. ၂ ဆ ဖြစ်သည်။
၂၀ ၂၂၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကုမ္ပဏီသည် IPO ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၈၇ သန်း ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် Anji နိုင်ငံပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု၊ စိတ်ရင်းမှန် ဖြင့် ရန်ပုံ ငွေ၊ CICC Capital ၊ Bain Capital ၊ GSR United Capital နှင့် China Thai Capital တို့ပါဝင်သည်။
Beijing Dong-IPO ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးသူ He We Love Nasdaq က ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာ
တစ်ပတ်ရစ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ မက်ဟေးရဲ့ ရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ယူမှုဟာ ၂၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာပြီး ပထမရက်အတွင်းမှာ တရုတ်တစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးကွက်အပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။